Wenger: Iguma soo dhicin in aan hogaamiyo Man United – Gool FM
Wenger: Iguma soo dhicin in aan hogaamiyo Man United
Kaafi September 11, 2017
(London) 11 Sebt 2017. Arsenal tababbareheeda Arsene Wenger waxa uu daaha ka rogay in uu diiday shaqada Sir Alex Ferguson in uu ka badalo.
Gudoomiyihii hore ee United Martin Edwards ayaa toddobaadkan sheegay in Wenger ahaa dookha kowaad ee badalka Fergsuon markii uu doonayey 2002 in uu ciyaaraha ka fariisto.
Ferguson ugu dambeyn waxa uu saxiixay heshiis cusub waxa uuna sii joogay 11 sano oo kale laakiin Wenger waxa uu ku adkeystay in uusan xiiseyn maadama ay aad Arsenal iyo United u xifaaltami jireen.
“Mar walba waxaan ahaa qof kalsooni qaba. Malaha maalin dhammaan xiriirada oo dhan ee I soo gaaray intii aan Arsenal joogay waan heli doonaa, laakiin waxaad weydiin kartaa Martin Edwards,” ayuu yiri Wenger.
“Maya, wali iguma soo dhicin in aan aad Manchester Unitedmaxaa yeelay mar walba halkan joogiddeeda ayaan ku faraxsanaa, In ka badan dadka inta ay igu faraxsanaayeen, halkan mar walba waan ku faraxanaa. Maxaa yeelay waxaan jeclahay dhaqanka kooxdan.”
Mourinho oo ku rajo weyn in Antoine Griezmann ku soo biiri doono United 2018-ka
“Madaxa wuu ku dhalin karaa, Laakiin lugahana hana tuso.”. Hazard oo ku camirtay Morata